DHEGEYSO: Maxaa Somalia u eg haddii loo xukumo badda balse ay Kenya diiddo go’aanka Maxkamadda ICJ? (Horay ma u dhaceen dalal diidey?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Maxaa Somalia u eg haddii loo xukumo badda balse ay Kenya...
DHEGEYSO: Maxaa Somalia u eg haddii loo xukumo badda balse ay Kenya diiddo go’aanka Maxkamadda ICJ? (Horay ma u dhaceen dalal diidey?)
(Muqdisho) 10 Okt 2021 – Kenya ayaa si cad ugu dhawaaqday inaysan aqoonsan doonin go’aanka dacwadda badda sida uu sheegay Xoghaye Dibadeedka dalkaasi, PS Macharia Kamau.
Waxaa su’aashaasi ka jawaabaya Cabdisalaan Cabdi oo ah sharci yaqaan ku nool dalka Kenya ee halkan ka dhegeyso.
Previous articleMaxkamadda Rafcaanka oo diiddey nin la bixi lahaa magaca bahal soo bixi doona marka uu Qiyaamuhu dhow yahay (Wax ka ogow arrinta dhan)
Next articleQaar ka tirsan madaxda NISA oo lagu eedeeyey inay ”xagal-daacinayaan” baarista kiiska Ikraan Tahliil